सेन्चुरीले बल्ल बोलायो एजीएम, ६.७५% लाभांशमा बुक क्लोज कहिले ? - || Siprabi Securities Pvt. Ltd ||
सेन्चुरीले बल्ल बोलायो एजीएम, ६.७५% लाभांशमा बुक क्लोज कहिले ?
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले ९औं वार्षिक साधारण सभा चैत १४ गते बोलाएको छ । सभामा बैंकले गत वर्षको नाफाबाट ६.७५% लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पेस गर्दैछ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नाफाबाट २% बोनस र कर प्रयोजन समेत गरी ४.७५% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । सेन्चुरीले १६ करोड ८३ लाख ९ हजार ४२३ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र ३९ करोड ९७ लाख ३४ हजार ८९९ रुपैयाँ नगद बाँड्नेछ ।
सभा, आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली काठमाडौंमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ । बैंकको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने एजेन्डा पनि छ । यस्तै, अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्न र गाभिन वा एक्विजिसन गर्न परेमा त्यसको सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पनि छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वासलात, नाफा–नोक्सान र नगद प्रवाहमाथि छलफल हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका एजेन्डा पनि राखिएको छ । सस्ंथापक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा पनि रहेको छ ।
हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छ । बोनस पश्चात पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड ३७ लाख ८१ हजार पुग्नेछ । सभा प्रयोजनका लागि बैंकले फागुन ३० गते बुक क्लोज गर्दैछ । फागुन २९ गतेसम्म कायम सेयरधनीले लाभांश सुरक्षित गर्न सक्नेछन् ।